Home Wararka Qoor Qoor oo ku eedeeyay Puntland inay soo abaabushay, soona hubeeysay ASWJ
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmad Qoor Qoor ayaa u sheegay golihiisa Wasiirada iyo hogaanka dhaqanka ee Beesha Habargedir in dagaalka ka dhacay Guriceel uu ahaa mid laga soo abaabulay Puntland.
“waxaan haynaa cadeeymo cad cad oo muujinaya in Saciid Deni lug weyn ku lahaa dib u soo noolaynta ururka Argagaxisada ee AhluSunna. Shaki horay waa iigu jiray laakiin hada cadeyn baan hayn. Waxa aanse garan karin waxa ay Puntland ka helayso in Galmudug burburto” ayuu Qoor Qoor oo aad u xanaagsan.
Qoor Qoor oo la hadlay saaxabiisa gaarka ah inta uusan xalay x qaban shirka jaraa’id ayuu sheegay in uu Shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doono in Puntland ku soo gardarootay Galmudug, laaiin saxibadiisa gaarka ah ayaa kula talisay inuusan si toos ah arintaan u kashifin hada, laakiin uu si sarbeeb ah u sheego in uu og yahay cida ka danbeeysay abaabulka iyo soo hubaynta Ururka AhluSunna.
Farmaajo iyo Saaxiibadiisa ayaa durbadiiba ku baahiyay baraha bulshada dareenka uu qabo Qoor Qoor iyada oo lagu eedeeyay dowlada Puntland in ay ka shaqeeynayso burburka Galmudug. Waxaa muuqata in xiriirka Puntland iyo Galmudug uu sii burburaya maalinba maalinta ka danbeeysa.
Dhanka kale, Saciid Cabdulaahi Deni iyo dowladiisa ayaan marnaba ka hadlin dhibka ka socda Gurcieel. Taasi oo si badisay dareenka iyo tuhunka laga qabo in Puntland lug ku leedahay dagaalka Guriceel.